आईसीयूबाट डाक्टरको अपिल- बाँच्न गा’ह्रो छ, सेल्फ लकडाउनमा बस्नुस्, सरकारले लकडाउन गर्दा धेरै ढिला हुन्छ – Gorkhali Dainik
April 24, 2021 268
आईसीयू वार्ड । टिकटिक आवाज….. !मुटुको चाल कहिले ८० मा दौडन्छ, कहिले ५० मा झर्छ । ‘सास फे’र्न गाह्रो भयो’, आईसीयू बेडबाट मलिन आवाज आउँछ । नर्स ह’तारिँदै अक्सिजनको ले’भल हेर्छिन् । अनि घो’प्टो पर्न सु’झाउँछिन् ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा स’रुवा रो’ग अस्पताल टेकुको आ’ईसीयू र भेन्टिलेटरमा रहेका बि’रामी न आफैँ शौचालय जान सक्छन्, न खाना खान सक्छन् । मास्क लगाउने त परको कुरा, चिकित्सकले एक सेकेन्ड पनि छोड्न मिल्दैन । ‘आज धेरै ‘स्ट्रे’स’ भयो । भित्र छिर्दा कसैको सुधार
आ’ईसीयू भेन्टिलेटरमा रहेका सबै सि’किस्त छन्’, बि’रामीको अवस्थाबारे एक नर्स अस्पतालका प्रमुख क’न्सल्टेन्ट डा. अनुप बाँस्तोलालाई सुनाउँछिन् । अस्पतालमा कस्तो स्थिति छ डा. अनुप र नर्सको मु’हारले प्रस्ट पार्छ । ‘बाहिर हिँड्दा केही नदेखिए पनि अस्पतालमा आ’गो ब’लेको छ ।
भित्र बसेर ल’ड्ने बि’रामीको कथा फरक छ । धेरै गा’ह्रो छ’, डा. अनुप भन्छन्, ‘अ’सहज परिस्थिति आएको छ । भित्र छि’रेपछि बचाउन सकिएला त भन्ने चि’न्ता लाग्छ । बि’रामी आफैँ खान नसक्ने सि’रियस छन् ।’तर, को’रोनाबाट जो’गिन कोही पनि सि’रियस नभएकोमा उनी चि’न्तित छन् ।
‘अहिले मे’कअप नगरे, लुगा नकिने, फिल्म हेर्न हलमा नगए हुन्न’, उनी भन्छन्, ‘यो संक्रमणबाट जो’गिने समय हो । २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन भनिएको छ । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन । अनुशासनमा कोही पनि बसेको छैन ।’अस्पतालमा एकै परिवारका चार जनासम्म भर्ना भएका छन् ।
‘आमा, छोरो, बुहारी तल वार्डमा छन् । बुबा माथि आ’ईसीयूमा । कु’रुवासमेत संक्रमित छन्’, डा. अनुप भन्छन्, ‘पहिले एक जना संक्रमित हुँदा आइसोलसनमा राखेर अरुलाई जो’गाएका थियौँ । यो पटक त्यस्तो छैन । जोगा’उन गाह्रो छ ।’‘आ’ईसीयू चाहियो । भे’न्टिलेटर चाहियो । अक्सिजन चाहियो’, डा. अनुपको मोबाइलमा बारबार घण्टी बज्छ ।
‘सबै भरि’एको छ । आ’ईसीयू र भे’न्टिलेटर छैन । अक्सिजनसम्म मिलाउन सक्छु’, उनी फोनबाट जवाफ फ’र्काउँछन् । ‘मेरै घरको सदस्य र म आफैँ सं’क्रमित भएँ भने पनि आ’ईसीयू, बे’ड, भे’न्टिलेटर छैन । स्टाफका लागि छैन । बे’डमा भएकालाई उठाएर अरु राख्ने स्थिति छैन’, उनी भन्छन्, ‘भे’न्टिलेटर र आ’ईसीयूका लागि मात्र दिनको १ सयभन्दा बढी फोन आउँछ ।’
काठमाडौंमा व्या’पक संक्रमण फै’लिएको उनको दा’बी छ । ‘तराईबाट राजधानी आएकाहरूबाट जसलाई स’र्‍यो, ती सि’किस्त छन्’, उनी भन्छन्, ‘तराईमा आ’गो बल्यो । काठमाडौं भु’सको ब’ममा छ । अब वि’स्फोट हुन्छ ।’लक्षण भएकालाई न’लुक्न उनी सुझाउँछन् । ‘लक्षण भएका परीक्षणको दा’यरामा आउनुहोस् ।
युवा छु भनेर सो’च्ने अवस्था छैन । युवा नै सि’किस्त भएका छन् । वृद्धवृद्धाको कुरै भएन । स्थिति असामान्य छ । लक्षण देखिएका मान्छे लु’केर नबसौँ’, उनी भन्छन् । ‘अनि ?’सेल्फ ल’कडाउन, सेल्फ लकडाउन, सेल्फ लकडाउन……! ‘जनता थु’निएर बस्नुपर्छ ।
सरकारले लकडाउन गरेपछि बसौँलाभन्दा धेरै ढिला हुन्छ । यहाँ बेडमा भएका पनि सि’किस्त छन् । प्लिज ! अब बाँ’च्नुको अर्को विकल्प छैन । तीन/चार हप्ता घरबाट बाहिर न’निस्कनुस्’, उनको निष्कर्ष छ सेल्फ लकडाउन ।म’जदुरका लागि राहतको व्यवस्था मिलाएर सबैलाई घर-घरमा नराखे कोरोनाका कारण अकालमा धेरैले ज्यान गु’माउनुपर्ने ख’तरा औल्याउँछन् डा. अनुप ।
लकडाउन गर्दा सबैभन्दा धेरै दिउँसो काम गरेर बिहान बेलुका छाक टा’र्ने मजदुर म’र्कामा पर्छन् । ‘जसलाई खान पुग्छ, उसले केही हप्ताका लागि जो’हो गर्नुपर्छ । म’जदुरका लागि सरकार र संघसंस्थाले यो समय राहत दिनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘अब जनतालाई कसरी जोगाउने भन्ने प्रश्न हो । नत्र अ’कालमा कोरोनाले धेरैको ज्यान जान सक्छ ।’
अत्यावश्यकबाहेक अरु सेवा रोकेर सबै अस्पताल को’भिडका बि’रामीको उपचारमा ख’टिनुको विकल्प देख्दैनन् उनी । ‘अत्यावश्यकबाहेक न’नको’भिडको सेवा रो’क्नुपर्छ । अस्पतालका बे’डहरू को’भिडका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘धेरै बि’रामी भएपछि के’यर कसरी गर्ने ? गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छौँ त भन्ने चि’न्ता छ ।’
अस्पताललगायत सबै क्षेत्रमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘आवश्यक कर्मचारी काममा आएर अरुलाई बि’दा दिनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारी कार्यालयदेखि बैंक, सं’घसंस्था सबैमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । भी’डले नै हो आ’गो बा’ल्ने ।’
अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीको मत पनि उस्तै छ । उनी पनि लकडाउनको विकल्प देख्दैनन् । ‘१४ महिना क’रायौँ । दूरी कायम भएन । मास्क लगाएनन् । भी’ड उस्तै छ । खोप ल’गाउन भनेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘कम्तीमा दुई हप्ता लकडाउन गरौँ ।
जो जहाँ छ, त्यहीँ बसाउनुपर्छ । क’न्ट्याक्ट ट्रे’सिङ, परीक्षण गर्दै संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ ।’अब सडकमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने दिन आएको निर्देशक डा. राजभण्डारी बताउँछन् । ‘अ’क्सिजन र औ’षधिले धा’न्ने स्थिति छैन । एक हप्ताभित्र सडकबाट उपचार सेवा सुरु हुन्छ ।
जसलाई अक्सिजन चाहिन्छ । बाहिरबाटै अ’क्सिजन दिँदै पठाउँदै गर्नुको विकल्प छैन’, उनी भन्छन्, ‘हे’ल्चे’क्य्राइँ धेरै भयो । क’न्ट्रोल गर्नै सकिएन । नयाँ भे’रियन्ट छिटो फैलिएको छ । हामी आ’त्तिएका छौँ ।’ डा. राजभण्डारी बि’रामीलई अक्सिजन दिन स्वयंसेवक राख्नुपर्ने स्थिति आएको बताउँछन् ।
‘कर्मचारी पुग्दैनन् । बि’रामीको अक्सिजन छुट्यो भने सकियो । अ’क्सिजन दिन स्वयंसेवक राख्नुपर्ने भएको छ’, उनी भन्छन् । सं’क्रमण प्रत्येक दिन दुई गुणाले बढ्दै गएको तथ्यांक देखाउँछन् निर्देशक डा. राजभण्डारी । उनले देखाएको पाँच हप्ताको तथ्यांकले भन्छ, ‘कोरोना संक्रमणबाट आफैँ जो’गिनुको अर्को विकल्प छैन ।’शिला पत्र
Prevवैशाख १२ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
Nextअक्सिजनको आपूर्तिमा रो’क्नेलाई फाँ’सी